हरेक दिन कपाल नुहाउने गर्नुभएको छ ? यी गल्ती नगर्नुहोस्, झर्न थाल्छ कपाल – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/हरेक दिन कपाल नुहाउने गर्नुभएको छ ? यी गल्ती नगर्नुहोस्, झर्न थाल्छ कपाल
काठमाडौँ । धेरैजसो मानिसले सोच्ने गर्दछन् की हरेक दिन कपाल नुहाउँदा कपाल कमजोर भएर झर्न थाल्दछ। तर विशेषज्ञका अनुसार कपाल हरेक दिन नुहाउँदा नभई ड्रायर गर्दा नोक्सान पुग्ने गर्दछ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
न्यूयोर्कका विशेषज्ञ वेस शार्पटनका अनुसार हरेक दिन स्याम्पु लगाउँदा कपाललाई कुनै नोक्सान हुँदैन्। तर जब कपाललाई सिधा वा घुमाउरो बनाउनका लागि तातो हेयर ड्रायरको प्रयोग गरिन्छ, तब कपाल कमजोर हुने गर्दछ। जसका कारण टुक्रिने तथा झर्ने समस्या आउने गर्दछ।
यस्ता व्यक्तिले कपाललाई धेरै कसेर बाँध्नबाट बच्नु पर्दछ। किनकी यसले पनि कपाललाई हानी पुर्याउने गर्दछ। जुन स्याम्पुमा डिटर्जेन्टको मात्रा बढी हुने गर्दछ, त्यसको प्रयोग पनि हानिकारक हुने गर्दछ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
वेट शार्पटनका अनुसार हरेक दिन कपाल नुहाउने व्यक्तिले स्याम्पुको प्रयोग कम गर्नु पर्दछ। जबकी कहिलेकाही सधै कपाल नुहाउने व्यक्तिलाई पनि धेरै स्याम्पुको प्रयोग आवश्यक हुने गर्दछ।
किनकी यसलाई धेरै स्याम्पु नलगाउँदासम्म कपाल सफा हुँदैन्। त्यसैले यस्तो अवस्थामा एकै पटक धेरै स्याम्पु नलगाउनुहोस् कपाललाई हानी पुग्ने गर्दछ।